Shariif Xasan oo si diiran loo soo dhaweeyay Magaalada Kismaayo iyo Mas’uuliyiin kale oo Halkaasi dhawaan tagaya. – Balcad.com Teyteyleey
Shariif Xasan oo si diiran loo soo dhaweeyay Magaalada Kismaayo iyo Mas’uuliyiin kale oo Halkaasi dhawaan tagaya.
By Maxamuud Axmed	 On Oct 6, 2017
Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maanta magaaladaasi ay gaareen Wafdi uu horkacayo Madaxweynaha Maamul Goboleedka K/Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaana garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo si weyn ugu soo dhaweeyay Madaxweyne Axmed Madoobe iyo qaar kamid ah Golahiisa wasiirada.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa ujeedka ay halkaasi u gaareen isaga iyo Wafdigiisa waxuu yahay ka qeyb galka shir wadahadal ah oo ay isugu imaanayaan madaxda maamul gobaleedyada iyo madax dowlada dhaxe ee dalka.
Maalinta Berito ayaa waxaa halkaasi lagu wadaa inay gaaraan madaxda maamulada Puntland Galmudug iyo Hirshabeele oo qeybka ah wadahadalka halka la rajeynayo in masuuliyiinta dowlada ay iyaguna berri gaaraan Magaalada Kismaayo si ay uga qeyb galaan kulanka.
Dhanka kale ujeedka Shirkaan balaaran ayaa ah in lagu xaliyo khilaafaadka mudooyinkan dambe soo kala dhex galay mas’uuliyiinta ugu saraysa dalka iyo kuwa maamulada Gobaleedyada oo ku aadan sida loo wajahayo arrimaha dibadda .
The post Shariif Xasan oo si diiran loo soo dhaweeyay Magaalada Kismaayo iyo Mas’uuliyiin kale oo Halkaasi dhawaan tagaya. appeared first on Ilwareed Online.
Wafdigii Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay .
Isteerinka Arrimaha Dibadda Soomaaliya (Faallo: Yuusuf Garaad Cumar)